Kor joogtada Caalamiga oo ammaantay Habka ay u socoto Doorashada Kenya |
Kor joogtada Caalamiga oo ammaantay Habka ay u socoto Doorashada Kenya
Kenya (estvlive) 11/08/2017
Waxaa maalintii saddexaad wali socota tirinta codadka doorashada, illaa iyo haatanna natiijooyinka hordhaca ah way ka biyo diidsan yihiin mucaaradka.
Kormeerayaasha caalamiga ayaa carabka ku dhuftay iney ku qanacsan yihiin hannaanka doorashada, maadaama ay goobo kala duwan geeyeen ergooyinka, si ay u indha indheeyaan xaaladda doorashada.
â€œTalaadadii lasoo dhaafey doorashadii ay u dareeraan shacabka Kenya waxey aheyd mid lagu kalsoonaan karo,â€ sidaasi waxaa yiri ururada Midowga Africa iyo Barwaaqo Sooranka.
Sidoo kale, ergada korjoogtada ee ka socota Midowga Yurub, ayaa sheegtay in musharaxiinta laga guuleystay ay aqbalaan guul darada, maadaama dabiici ahaan uu tartanka dimuqraadiyaddu laba qof ka wada qoslin.
Hoggaamiyaha mucaaradka oo ah musharax madaxweyne Raila Odinga, ayaa ku tilmaamey codadka la tiriyey iney yihiin kuwo la macmaley, isagoo ku gacan seyray inuu u hambalyeeyo Madxweyne Uhuru.
Raila, wuxuu sheegay in arbacadii computer-rada ay isticmaalayeen guddiga madaxa bannaan ee doorashada iyo xuduudaha Kenya la jabsadey, dadweynaha Kenyana ay ka marqaati noqonayaan xatooyadii ugu xumeyd ee abid taariikhda loo geysto doorasho.
Guddiga doorashada iyo xuduudaha wuxuu sheegay iney jirtey isku day la doonayey in lagu jabsado computer-radooda, ha yeeshee talaabadaasi lagu guul dareystay.
Madaxa ergada kormeerayaasha ka socday dalalka Barwaaqo Sooranka madadaxweynihii hore ee Ghana John Mahama, ayaa sheegay inaaney jirin sabab shaki loo galiyo awoodda ay u leeyihiin guddiga doorashada fulinta doorasho xor iyo xalaal ah.
â€œWaxaan aaminsan nahay in doorashada ay ku dhacdey hannaan hufan, waana mid lagu kalsoonaan karo oo ay tahay in lagu ammaano Keenyaanka,â€ ayuu sidaasi ka yiri John Mahama shir jaraaâ€™id oo uu ku qabtay Nairobi.
Isagoo soo gudbinaya fikirkan mid la mida, madaxa hawlgalka kor joogtada ka socota Midowga Africa, madaxweynihii hore ee South Africa Thabo Mbeki, ayaa sheegay inuu ku qanacsan yahay hannaanka codbixinta uu u qabtay guddiga doorashada.
Thabo Mbeki, ayaa aad u ammaaney hannaankii ay u dhacday doorashada dalkan Kenya, inkastoo dhanka uu sheegay in wax waliba wada hadal lagu dhameeyo.
Wuxuu intaa ku darey Thabo Mbeki, in cabashada ay soo gudbiyeen mucaaradka in si hufan oo laga baaraan dagay u baaraan guddiga doorashada.
Madaxa hor kacaya kooxda kor joogtada ee ka socota xarunta Carter, xoghayihii hore ee Mareykanka John Kerry, ayaa ku nuux nuux sadey in sugnaanta iyo hufnaanta hannaanka doorashada uu yahay wali mid walaacsan.
Wuxuu ku booriyey dhammaan qeybaha ku lugta leh doorashada Kenya iney ka war dhawraan natiijada kama danbeysta ah, qoladii laga guuleystana ay aqbasho guul darada.